Mitemo yekushandisa - Richardmille.to
Ndapota verenga aya mazwi uye mamiriro zvakanyatsonaka usati washandisa Service Yedu.
Nezve zvinangwa zveiyi Mitemo uye Mamiriro:
nyika zvinoreva: Washington, United States
Terms uye Conditions (zvakare inonzi "Mitemo") zvinoreva iyi Mitemo neMamiriro izvo zvinoumba chibvumirano chose pakati Pako neKambani maererano nekushandiswa kweSevhisi. Iyi Chibvumirano cheMitemo neMamiriro chakagadzirwa nerubatsiro rweMitemo neMamiriro jenareta.
Yetatu-bato Social Media Service zvinoreva chero masevhisi kana zvirimo (zvinosanganisira data, ruzivo, zvigadzirwa kana masevhisi) zvinopihwa neyechitatu-bato rinogona kuratidzwa, kusanganisa kana kuita kuti riwanikwe neBasa.
Iyi ndiyo Mirairo neMamiriro ezvinhu anotonga kushandiswa kweSevhisi iyi uye chibvumirano chinoshanda pakati pako Iwe neiyo Kambani. Iyi Mirairo neMamiriro ezvinhu anotyora kodzero uye zvisungo zvevashandisi vese maererano nekushandiswa kweBasa.
Kuwana kwako ku uye kushandiswa kweSevhisi kunoonekwa paKwako kugamuchira uye kutevedza aya maMitemo neMamiriro. Iyi Mitemo neMamiriro ezvinhu anoshanda kune vese vashanyi, vashandisi uye vamwe vanowana kana kushandisa iyo Sevhisi.
Nekuwana kana kushandisa iyo Service Unobvuma kusungwa neiyi Mitemo neMamiriro. Kana Iwe usingabvumirani nechero chikamu cheiyi Mitemo neMamiriro ezvinhu ipapo Iwe haugone kusvika paSevhisi.
Iwe unomiririra kuti iwe unopfuura zera ramakore gumi nemashanu. Kambani haibvumidze avo vari pasi pemakore gumi nemasere kuti vashandise Service.
Kuwana kwako ku uye kushandisa kweSevhisi kunewo mamiriro paKubvuma kwako uye kutevedza neChakavanzika Policy yeiyo Kambani. Yedu Yakavanzika Policy inorondedzera Maitiro edu nemaitiro pane aunganidzwa, kushandisa uye kuburitsa ruzivo rwemunhu ruzivo kana Iwe uchishandisa Chikumbiro kana Webhusaiti uye Inokuudza Iwe nezve ako Kakavanzika kodzero uye kuti mutemo unokudzivirira sei Ndokumbirawo kuti muverenge Gwaro Redu Rakavanzika musati maishandisa Basa Redu.
Service Yedu inogona kunge iine zvinongedzo kune wechitatu-bato webhusaiti masaiti kana masevhisi asiri ayo kana anodzorwa neCompany.
Iyo Kambani haina simba pamusoro, uye inotora hapana mutoro we, izvo zvirimo, zvakavanzika marongero, kana zviitwa chero yechitatu mapato webhusaiti kana masevhisi. Iwe unowedzera kubvuma uye kubvuma kuti Kambani haizove nemutoro kana mhosva, zvakananga kana zvisina kunanga, kune chero kukuvara kana kurasikirwa kwakakonzerwa kana kufungidzirwa kukonzerwa kana kune chekuita nekushandiswa kana kuvimba nechero chinhu chakadai, zvinhu kana masevhisi anowanikwa kana kuburikidza chero newebhu saiti kana masevhisi.
Isu tinokurayira zvikuru Iwe kuti uverenge mazwi uye mamiriro uye zvakavanzika zvirongwa zvewechitatu-bato webhusaiti kana masevhisi aunoshanyira.
Tinogona kugumisa kana kumisa kugona kwako nekukasira, tisati tambozivisa kana mutoro, nekuda kwechikonzero chero chipi zvacho, kusanganisira pasina mvumo kana Iwe uchityora iyi Mirairo neMamiriro.
Kana wapedza basa, Yako kodzero yekushandisa Service inozopera pakarepo.
Kunyangwe paine kukuvadzwa kwaungave nako, chikwereti chose cheKambani uye chero yevanopa rubatsiro pasi pechero kupihwa kweMitemo iyi uye Mushonga wako wega wezvose zvataurwa zvichatemerwa pamari yakabhadharwa newe kuburikidza neSevhisi kana 100 USD kana usati watenga chero chinhu kuburikidza neSevhisi.
Kusvika pamwero wakakura unobvumidzwa nemutemo unoshanda, pasina chiitiko Kambani kana vatengesi vayo vanofanirwa kuve nemhosva kune chero yakakosha, yakangoitika, isina kunanga, kana zvakakanganisika kukuvadza chero (kusanganisira, asi kwete kungogumira, kukuvadzwa kwekurasikirwa kwepundutso, kurasikirwa kwedata kana rumwe ruzivo, rwekuvhiringidza bhizinesi, rwekukuvara iwe pachako, kurasikirwa kwekuvanzika kunobuda kunze kana neimwe nzira ine chekuita nekushandiswa kana kusakwanisa kushandisa iyo Service, yechitatu-software software uye / kana yechitatu-munhu Hardware anoshandiswa neSevhisi, kana neimwe nzira maererano nechirongwa chero chipi cheMitemo iyi), kunyangwe kana Kambani kana chero mutevedzeri arayirwa nezvekukuvara kwakadai uye kunyangwe kana mushonga ukatadza kuita kwayo zvakakosha.
Dzimwe nyika hadzibvumire kubviswa kwemawaranti kana kuremerwa kwechikwereti chekukuvara kwakangoitika kana zvine mutsindo, zvinoreva kuti zvimwe zvezvinogumira zviri pamusoro zvinogona kusashanda. Mumatunhu aya, chisungo chebato rega rega chichaganhurirwa padanho rakakura rinotenderwa nemutemo.
"SEZVIRI" uye "SEZVINOWANIKA" Disiki
Iyo Sevhisi inopihwa Iwe "AS IS IS" uye "AS AVAILABLE" uye nezvose zvinokanganisa uye nehurema pasina garandi yemhando ipi Kusvikira pamwero wakakura unobvumidzwa pasi pemutemo unoshanda, Kambani, pachayo uye pachinzvimbo cheVakabatana navo uye nevaya vane marezinesi avo uye vanopa masevhisi, vanoratidzira pachena zvivimbiso zvese. Sevhisi, kusanganisira zvese zvirevo zvekushambadzira, kugwinya kwechimwe chinangwa, zita uye kusaputsa, uye warandi dzinogona kumuka kunze kwekubata, kosi yekuita, mashandisiro kana maitiro ekutengesa. Pasina muganho kune zvataurwa pamusoro apa, Kambani haipe garandi kana kuita, uye haimiriri chero mhando iyo iyo Service inosangana neZvaunoda, kuzadzisa chero zvakatemwa mhedzisiro, kuenderana kana kushanda nechero ipi software, mashandiro, masisitimu kana masevhisi, inoshanda Pasina kukanganiswa, sangana nechero kuita kana kutendeseka zviyero kana kusakanganiswa pasina kana kuti chero zvikanganiso kana kukanganisa kunogona kana kuchizogadziriswa.
Pasina kudzikamisa izvo zvataurwa, kana iyo Kambani kana chero mupi wekambani anoita chero chinomiririra kana garandi yerudzi rupi zvarwo, kuratidza kana kureva: (i) nezve kushanda kana kuwanikwa kweSevhisi, kana ruzivo, zvirimo, uye zvinhu kana zvigadzirwa zvaisanganisira ipapo; (ii) kuti Sevhisi haizovhiringidzike kana kukanganisa-isina; (iii) nezve kurongeka, kuvimbika, kana mari yeruzivo chero rupi zvaro kana zvemukati zvinopihwa kuburikidza neSevhisi; kana (iv) kuti Sevhisi, maseva ayo, zvirimo, kana mae-mail anotumirwa kubva kana akamiririra Kambani haana mavhairasi, zvinyorwa, mabhiza eTrojan, honye, ​​malware, mabhomba enguva kana zvimwe zvinokuvadza.
Mamwe masimba anotendera kusaburitswa kwemamwe marudzi ewarandi kana kuganhurirwa pane kodzero dziri pamutemo dzemutengi, saka zvimwe kana zvese zviri pamusoro apa kusabvumidzwa uye zvausingakwanisi kuita hazvishande kwauri. Asi muzviitiko zvakadaro kusarongeka uye zvausingakwanisi kutsanangura muchikamu chino zvinoshandiswa zvakanyanya kusimbisa mutemo unoshanda.
Mitemo yeNyika, kusasanganisa kupokana kwayo kwemirairo yemitemo, ichatonga aya Mitauro uye Kushandisa kwako kweSevhisi. Kushandisa kwako Chishandiso kunogona zvakare kuve pasi pemimwe mitemo yemuno, yenyika, yenyika, kana nyika dzepasirese.
Kana uine chaunombonetsekana kana kupokana pamusoro peSevhisi, Unobvuma kutanga waedza kugadzirisa gakava zvisirizvo nekubata Kambani.
YeVashandisi veEuropean Union (EU)
Kana iwe uri mutengi weEuropean Union, iwe unozobatsirwa kubva kune chero api zvawo zvekumanikidzwa emutemo wenyika iyo mauri kugara mairi.
United States Legal Mutemo
Iwe unomiririra uye waranti kuti (i) Iwe haugare munyika iri pasi pehurumende yeUnited States, kana iyo yakasarudzwa nehurumende yeUnited States senyika "yemagandanga inotsigira" nyika, uye (ii) Iwe hausi yakanyorwa pane chero hurumende yeUnited States runyorwa rwemapato akarambidzwa kana kuti akarambidzwa.
Severability uye Waiver
Kana chero kupihwa kweMitemo iyi kwabatwa kusingazungunutswe kana kusingabvumirwe, kupihwa kwakadaro kunoshandurwa nekududzirwa kuti kuzadzikise zvinangwa zvekupa zvakadaro kusvika pamwero mukuru pasi pemutemo unoshanda uye zvasara zvasara zvicharamba zvichishanda.
Kunze kwekunge zvapihwa pano, kutadza kushandisa kodzero kana kuda kuita chisungo pasi peMitemo iyi hakuzokonzere kugona kwebato kushandisa kodzero yakadaro kana kuda kuita kwakadaro chero nguva ipi zvayo mushure uyezve hakuzove kuregererwa kwekutyora kunogonesa kuregedza. yekumwe kutyora kunotevera.
Aya maMitemo neMamiriro anogona kunge akashandurwa kana Takaita kuti zviwanikwe kwauri paSevhisi yedu. Unobvuma kuti chinyorwa chekutanga cheChirungu chinokunda pakukakavara.
Shanduko kune Aya Mitemo uye Mamiriro
Isu tinochengetera kodzero, paUngwaru hwedu chete, kushandura kana kutsiva aya maMitemo chero nguva. Kana kudzokororwa kuri chinhu Tichaedza zvine mutsigo kupa 30 mazuva 'ziviso pasati patanga mazwi matsva. Chii chinoshandura shanduko yezvinhu chinozogadziriswa Pachangu chete.
Nekuramba uchiwana kana kushandisa Service Yedu mushure mekudzokorora iko kushanda, Unobvuma kusungwa nemazwi akagadziridzwa. Kana Iwe usinga bvumire kune mitsva mitsva, yakazara kana chikamu, tapota rega kushandisa webhusaiti uye neSevhisi.
Kana iwe uine chero mibvunzo nezveaya aya Mvumo neMagariro, Unogona kutibata nesu: